काठमाडौं, पुस ९ : प्रसिद्ध भारतीय गायिका आशा भोस्ले नेपाल आएकी छन् । उनी बुधवार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।...
रामकृष्ण ढकाल र उनकी श्रीमती निलमबीच सम्बन्धविच्छेद, छोरी आमासँगै बस्ने
काठमाडौं, पुस ९ : चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र उनकी श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गायक ढकाल र...
काठमाडौं, पुस ७ : साधना कला केन्द्र पुतलीसडकको निमन्त्रणामा भारतकी प्रसिद्ध गायिका आशा भोस्ले बुधबार नेपाल आउँदै छन् । उनले...
मयुरले जितेको ‘सिण्डिकेट’
पछिल्लो समय नेपाली मिडियामा यातायात व्यावसायीको सिन्डिकेडले 'ट्रेण्ड' को रुप लियो । यो सिन्डिकेटको चर्चा यती भयो की मिडियामा मात्र नभई सार्वजनिक स्थलमा समेत एक बहसको विषय बन्यो । कत्तिले...
स्वास्‍नी, श्रीमती वा जीवनसंगिनी !
पञ्चेबाजामा विवाह घर अनि पुरै गाउँ नै रमाइरहेको छ । धेरैको ध्यान मै तिर छ । घुमिफिरी,तान्निएर अनि तन्किएर मलाई नै नियालिरहेका छन् । म लजाउँदै अझ निहुँरिए । कोही...
साहित्यकार शर्मालार्इ ‘उत्तम शान्ति पुरस्कार’
काठमाडौं: यस वर्षको “उत्तम शान्ति पुरस्कार” पूर्व शिक्षामन्त्री एवं साहित्यकार दीनानाथ शर्मालाई प्रदान गरिने भएको छ । उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले २०४४ सालदेखि आख्यानमुक्त गद्य विधामा रचना गरिएका उत्कृष्ट...
नेपालका कविको शैक्षिक योग्यता कति ?
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालद्वारा २०३१ मा ‘साहित्य महाविद्यावारिधि’बाट सम्मानित कवि धरणीधर कोइराला कलेज पढिरहेका वेला जागिर नपाएपछि बिदेसिएका थिए भन्दा पत्याउन गाह्रो लाग्छ । धरणीधर कोइराला : २४ माघ, १९४९ मा...
१६ वर्षीया ज्वालाकाे चित्रकला प्रदर्शनी
काठमाडौं: १६ वर्षकी ज्वाला ढकालको चित्रकला कस्तो होला? नेपाल आर्ट काउन्सिलमा जारी ‘माई इम्याजिनेसन माई क्रिएसन’मा देख्न सकिन्छ। वैशाख २८ सम्म चल्ने प्रदर्शनीमा ज्वालाका ११० चित्र विक्रीमा छन्। उनले प्रयास...
अवैध सुन सहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौं - पछिल्ला तीन महिनामा अध्ययन, अवलोकन, अनुभव साटासाट, सिकाइ, सांस्कृतिक अवलोकन, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका शीर्षकमा १ हजार १ सय २० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधि...
काठमाडौं : अवैध सुन सहित काठमाडौंबाट दिलिप शाही, सुनिता खड्गी र मोहम्मद साहिव अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ